Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta dagaaladii ugu dambeeyay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta dagaaladii ugu dambeeyay
Posted by ONA Admin	/ April 6, 2014
Warbixintii ugu dambeyasya een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO waxay sii faahfaahsan uga warantay dagaallo badan oo ciidanka gumaysiga lagu naafeeyay dhamaadkii bishan March iyo bilowga bishan Abriil. Warbixinta oo ka kooban 14ban dagaal oo cadawga lagu qaaday ayaa cadawga lagu gaadhsiiyay inta tirakoobkooda oo faahfaahsan la helay dhimasho gaadhaya 57 askari oo darajooyin kala duwan lahaa oo kaga bakhtiyay goobahaa dagaalka iyo dhaawacu intaa ka badan oy kala tageen goobaha. Warbixinta dagaalada ayaa sidan u dhacay;
13/3/14 Qurqura oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/3/14 Warsug oo dagamada Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/3/14 Dhagmalay oo Garigo’an katirsan dagaal xoogleh oo CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin tiisa lahaynin.
30/3/14 Lamanlowshe oo dagmada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 3 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
30/3/14 Naasohablood oo dagmada Qabribayax katirsan weerar culus oo ay CWXO kuqaadeen ciidamada naflacaariga ah ee gumaysiga Itoobiya waxay halkaas qudha kaga jareen 14 ciidanka gumaysiga ah 16 kalana way kaga dhaawaceen.
1/4/14 Buuba oo Dhagaxbuur katirsan weerar gaadma ah oo ciidanka cadawga lagu qaaday waxaa goobta lagaga dilay 1 askari.
2/4/14 Baliqudhacle oo dagmada Dhoobawayn ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa cadawga dhexmaray waxaa loogu awood sheegtay ciidankii wayaanaha waxaana laga dilay 17 askari 14 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/4/14 Fariiqyada oo Dagmada Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
2/4/14 Afwayne oo dagmada Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanaka gumaysiga laga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/4/14 Taaloole oo Dagmada Sagag katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 2/4/14 Dabdheere oo Dhanaan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 4 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/4/14 Madaxmaroodi oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
4/4/14 Kurtun oo Dhagaxbuur udhaw waxaa kugadoomay gaadhi ay ciidamada gumaysigu wateen waxaana goobta kubakhtiday 7 askari 9 kalana way ku dhaawacantay. Dhanka kale 2/4/14 Magaalada Qabridahare waxuu dagaal ku dhexmaray 2 ciidan oo kuwa gumaysiga kawada tirsan waxayna iska dileen inta lahubo 7 askari dhaawac aan laxaqiijinin na waxaa lageeyay dhakhtarka ciidanka cadawga.